Waa Qiso Aad U Murugo Badan Xanta Iyo Dhibka Eyleedahay> | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Waa Qiso Aad U Murugo Badan Xanta Iyo Dhibka Eyleedahay>
zubhan Allah walaal ila akhrista qisadan
Qiso ku cibro qaadasho mudan bal ila aqrista asxaabey.
Haweeney meeydadka dhaqdo ayaa loo keenay meyd dumar ah si ay u dhaqdo màrkaas ayeey bilowday in ay meydkii dhaqdo waxeeyna soo qaadatay weel biyo ku jiraan saa markey xaga meydka u soo dhaweeysay ayaa meydkii soo kacay biyihiina iska qabtay subxaana llah haweeneydii meydka loo kenay ayaa qeeyliday oo tiri ii keena dhaqtar qof nool baa ii keenteene .!
Markaasa waxaa yimid dhaqtarkii oo baaritaan ku sameeyay meydkii wuxuuna ogaaday in ay haweeneydani mudo dheer dhimatay waana isaga tagay meeyd dhaqdadii ayaa is tiri malaha adigaa si wax kaa noqdeene inta acuudu billeysatid meydka iska dhaq hadane mar labaad ayeey soo kacday oo biyihii lagu dhaqi lahaa diiday.iskana qabatay…waxey ku qeeylisay hadana war maxaa meydka ku dhacayna ? caruurtii ayaa ku jawaabay waxba kuma dhicin.
Waxaana lawacay sheekh cilmi leh qisadiina loo sheegay . Sheekhii ayaa ku yiri haweneydii meydka dhaqeeysay weeydii eheladeeda islanta meydka ah waxeey suubin jirtay lakin gabdhaheedii oo la socday meeydka waa diideen in ay sheegan sirta hooyadood.balse sheekha ayaa u shegay gabdhaha hadeysan wax ka sheegin xaaladii ay ku nooleed hooyadood lama dhaqayo lamana duugayo waana ay qaadanayaan meydkooda.
Gabdhihii oo yaaban ayaa midi tiri haye sheekhow ma doonayo in aan hooyadeey wax ka shego lakin.waa lama huraane i dhageeyso sheekh hooyadeey waa dukan jirtay soon salaad sadaqo intaba waa laheyd. ………
Waxeeysa hoyo qof hal ceeb leh .ceebtaas oo aheyd xan iyo nabiimo umada ayeey isku diri jirtay aroosyada ayada oo aan laga casuumin ayeey aadi jirtay si ay u soo aragto dad ay taqaan markaas war isaga geeyso. Anaga oo caruurteeda ah xataa waa isku kaaya diri jirtay .waxaana dhacday in aan xaafadii caan ka noqonay .maalin dhaweed ayaan dhahnay hooyo xaafadii waa ku ceebownaye aan u guurno xaafad eeysan cidi naga aqoon…..
Waxeeyna nagu dhahday uma socdo meel kale ee qofkii i xisaabinayo waa kee .waxaan dhahnay hooyo rabi ayaa ku xisabinayo hadii aadan umada ka xishooneyn ee umada iska daa..waxeeyna noogu jawaabtay adinku noo kala baxa aniga iyo illaah mana ka baxayo gurigeeyga cid iga bixin kartana majirto .allahu mustacaan .gabadhii oo ooyaysaa hadalkiina siiwada ayaa tiri .. Lakin.. sheekhow hooyo halkiibey ku dhimaday oo allah ayaa gurigii qasab uga soo saaray hooyadeen ma ahan qof cayilan ama buuran .waxaana lagu soo qaaday 6 qof aad ayeey u culustahay……sheekhii ayaa aad u morgooday ogna natiijada ay leedahay xanta iyo namiimada ayaa isaga dhaqaaqay meeshii.
.wallala yaal qisadad layabka leh waxaan ka faa.iidnay in ey xanta iyo dadka oo la isku diro lagu gaaro cadaab aduun iyo mid aakhiro mida kale .hadii lagu yiraahdo illah ka cabso waa in aad joogsataa durba oo aadan dhihin aan galo naarta waayo rabigaa waa ku xisaabin karaa waqtigaas laftiisa..
Nafteeyda iyo tiina allah uga tugayaa .illahey nama fadeexeyo aduun iyo aakhiro aamiiiiiiin